Ny Filazantsara - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny filazantsara
Ny filazantsara dia vaovao tsaran’ny famonjena amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy. Izany no hafatra fa Kristy maty noho ny fahotantsika, dia nalevina, nitsangana tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina, ary avy eo dia niseho tamin’ny mpianany. Ny filazantsara dia ny vaovao tsara ahafahantsika miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny asa famonjen’i Jesosy Kristy. (1. Korintiana 15,1-5; Asan'ny Apostoly 5,31; Lioka 24,46-48; John 3,16; Matio 28,19-20; marika 1,14-15; Asan'ny Apostoly 8,12; 28,30-31)
Nahoana ianao no teraka
Natao ho tanjona iray izy ireo! Andriamanitra dia namorona ny tsirairay avy amintsika noho ny antony iray - ary tena sambatra isika rehefa miaina mifanaraka amin'ny tanjona nomeny antsika. Tokony ho fantatrao hoe inona izany.
Betsaka ny olona tsy mahalala ny momba ny fiainana manontolo. Miaina izy ireo ary maty izy ireo, mitady karazana dikany sasany ary manontany tena raha manana tanjona ny fiainany, aiza ny fananany, raha tena misy dikany ny fikaonan-javatra lehibe. Mety nangonin'izy ireo ny famoriam-bidy tsara indrindra, na nahazo ny loka malaza tao amin'ny lisea, fa ny drafitra sy ny nofinofy tanora dia mandositra amin'ny fiadanam-po sy fisavoritahana momba ny fotoana tsy nahomby, fifandraisana tsy nahomby na tsy tambo isaina "Raha toa" na "Inona no mety".
Betsaka ny olona miaina fiainana tsy misy dikany ary tsy feno nefa tsy misy tanjona sy dikany izay mihoatra noho ny fahafaham-po vetivety eo amin'ny vola, ny firaisana ara-nofo, ny fahefana, ny haja, ny laza na tsy misy dikany, indrindra rehefa manakaiky ny haizin'ny fahafatesana. Saingy ny fiainana dia mety mihoatra lavitra noho izany satria Andriamanitra dia manolotra bebe kokoa ho antsika tsirairay. Manome antsika tena dikan'ny tena izy sy misy dikany marina eo amin'ny fiainana Izy - fifaliana noho ny namoronany antsika.
Fizarana 1: Ny olombelona noforonina araka ny endrik'Andriamanitra
Milaza amintsika ny toko voalohany ao amin’ny Baiboly fa namorona ny olona “tahaka ny endriny” Andriamanitra (1. Mosesy 1,27). “Natao araka ny endrik’Andriamanitra” (andininy iray ihany) ny lehilahy sy ny vehivavy.
Mazava ho azy fa tsy natao tahaka ny endrik'Andriamanitra isika raha jerena ny haavony na ny lanjany na ny hoditry ny hoditra. Fanahy Andriamanitra, tsy zavaboary noforonina, ary noforonina amin'ny zavatra isika. Na izany aza, Andriamanitra dia nanao ny olombelona tahaka ny endriny, izay midika fa nahatonga antsika ho mitovy aminy. Manana fahatokisan-tena isika, afaka mifandray, manomana, mieritreritra mamorona, mamolavola sy manangana, mamaha ny olana ary ho hery ho an'ny tsara eto amin'izao tontolo izao. Ary afaka mitia.
Tokony ho “nanaraka an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana marina” isika (Efes 4,24). Matetika anefa ny olona no tsy mitovy amin’Andriamanitra amin’io lafiny io. Raha ny marina, matetika ny olona dia mety ho tena ratsy fanahy. Kanefa, na dia eo aza ny faharatsiantsika, dia misy zavatra azontsika ianteherana. Voalohany indrindra, dia tsy mivadika amin’ny fitiavany antsika foana Andriamanitra.
Ohatra tonga lafatra
Manampy antsika hahatakatra ny dikan’ny hoe natao araka ny endrik’Andriamanitra ny Testamenta Vaovao. Milaza amintsika ny apostoly Paoly fa manova antsika ho tonga lafatra sy tsara Andriamanitra, dia ny endrik’i Jesosy Kristy. “Fa izay nofidiny no notendreny koa mba hitovy endrika amin’ny Zanany, mba ho Lahimatoa amin’ny rahalahy maro Izy” (Romana . 8,29). Raha lazaina amin’ny teny hafa, dia efa nokasain’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny hahatongavantsika tahaka an’i Jesosy, ilay Zanak’Andriamanitra tao amin’ny nofo.
Nilaza i Paoly fa i Jesosy mihitsy no “endrik’Andriamanitra” (2. Korintiana 4,4). “Izy no endrik’Andriamanitra tsy hita” (Kolosiana 1,15). Izy no ohatra tonga lafatra ny amin’izay nanaovana antsika. Zanak’Andriamanitra ao amin’ny fianakaviany isika ary mibanjina an’i Jesosy, Zanak’Andriamanitra, mba hahitana ny dikan’izany.
Hoy ny iray tamin’ireo mpianatr’i Jesosy: “Asehoy anay ny Ray.” ( Jaona 14,8). Namaly i Jesoa hoe: “Izay mahita Ahy dia mahita ny Ray” (and. 9). Raha lazaina amin’ny teny hafa, dia hoy i Jesosy: Izay tokony ho fantatrao momba an’Andriamanitra dia ho hitanao ato amiko.
Tsy ny loko hoditra, ny fomba fitafy, na ny fahaizan’ny mpandrafitra no resahiny fa ny saina sy ny toe-tsaina ary ny fihetsika no resahiny. Andriamanitra dia fitiavana, hoy i Johannes (1. Johannes 4,8), ary asehon’i Jesosy amintsika ny atao hoe fitiavana sy ny fomba tokony hitiavantsika amin’ny maha-olombelona izay miova ho tahaka ny endriny.
Koa satria ny olombelona dia natao araka ny endrik’Andriamanitra ary Jesosy dia mitovy amin’ny endrik’Andriamanitra, dia tsy mahagaga raha namorona antsika araka ny endrik’i Jesosy Andriamanitra. Tokony “hiseho” ao anatintsika Izy (Galatiana 4,19). Ny tanjontsika dia ny “ho tonga amin’ny ohatry ny fahafenoan’i Kristy” (Efesiana 4,13). Rehefa novolavolaina araka ny endrik’i Jesosy isika, dia tafaverina ao anatintsika indray ny endrik’Andriamanitra ka tonga tahaka ny nahariana antsika.
Angamba tsy tena mitovy amin’i Jesosy ianao izao. Tsy maninona izany. Efa fantatr’Andriamanitra izany, ka izany no antony iarahany miasa aminao. Raha avelanao izy dia hanova anao izy - hanova anao - mba hahatonga anao ho tonga tahaka an'i Kristy bebe kokoa (2. Korintiana 3,18). Mitaky faharetana izany - fa ny dingana dia mameno ny fiainana misy dikany sy tanjona.
Maninona no tsy nataon'Andriamanitra haingana io? Satria tsy mandray an-tsaina ny tena olona, ​​mieritreritra sy olona be fitiavana ianao dia tokony ho araka ny sitrapony. Ny fiovan'ny saina sy ny fo, ny fanapahan-kevitra hitodika amin'Andriamanitra sy fatokisana an'Andriamanitra dia mety ho vetivety ihany, toy ny fanapahan-kevitra ny mandeha amin'ny lalana iray. Fa ny tena fitsangatsanganana eny an-dalana dia mitaky fotoana ary afaka feno sakana sy zava-tsarotra. Mitovy amin'izay ihany, mitaky fotoana hanovana fomba fanao sy fitondran-tena ary toetra lalina.
Tia anao koa Andriamanitra ary maniry anao ho tia azy. Fa ny fitiavana dia fitiavana ihany raha omena malalaka, tsy rehefa takiana izany. Ny fitiavana an-tery dia tsy fitiavana mihitsy.
Dia mihatsara ary mihatsara hatrany
Ny fikasan'Andriamanitra ho anao dia tsy ny hitovy amin'i Jesosy 2000 taona lasa izay ihany - fa ny hahatongavana amin'izao maha-izy Azy izao koa - nitsangana, tsy mety maty, feno voninahitra sy hery! “Hanova ny vatantsika foana Izy, mba ho tonga tahaka ny vatany be voninahitra, araka ny heriny, izay maharesy ny zava-drehetra.” (Filipianina) 3,21). Raha tafaray amin’i Kristy isika amin’izao fiainana izao, dia “ho tahaka Azy koa isika amin’ny fitsanganana amin’ny maty” (Romana). 6,5). “Ho tahaka Azy isika”, hoy i Jaona nanome toky antsika (1. Johannes 3,2).
Raha zanak’Andriamanitra isika, hoy ny nosoratan’i Paoly, dia afaka matoky isika “fa isika koa dia hiara-hatsangana aminy ho amin’ny voninahitra” (Romana). 8,17). Hahazo voninahitra tahaka ny an’i Jesosy isika — vatana tsy mety maty, tsy mety lo, vatana ara-panahy. Hitsangana amin’ny voninahitra isika, hitsangana amin’ny hery (1. Korintiana 15,42-44). “Ary tahaka ny nitondrantsika ny endrik’ny etỳ an-tany no hitondrantsika ny endrik’ilay any an-danitra koa” - ho tahaka an’i Kristy isika! (V. 49).
Te hanana voninahitra sy tsy maty ve ianao? Andriamanitra no namorona anao ho amin'izany tanjona izany! Fanomezana mahafinaritra izy, izay tiany homena anao. Hoavy mahafinaritra sy mahafinaritra izany ary manome dikany sy fiainana eo amin'ny fiainana.
Rehefa hitantsika ny vokatra farany dia misy dikany kokoa ny dingana ataontsika ankehitriny. Ny fahasahiranana, ny fitsapana ary ny fangirifiriana eo amin'ny fiainana, ary koa ny fifaliana, dia misy dikany kokoa rehefa fantatsika ny momba ny fiainana. Rehefa fantatsika ny voninahitra horaisintsika dia ho mora kokoa ny fiaretana ny fahoriana eto amin’ity fiainana ity (Romana 8,28). Nanome fampanantenana lehibe sy sarobidy ho antsika Andriamanitra.
Misy olana ve eto?
Fa miandry iray minitra, mety hieritreritra ianao. Tsy ho mendrika ho an'io karazana voninahitra sy fahefana io mihitsy aho. Olona tsotra fotsiny aho. Raha toerana tonga lafatra ny lanitra dia tsy ao aho; mikorontana ny fiainako.
Tsara izany - fantatr'Andriamanitra, saingy tsy hijanona izy io. Nanana drafitra ho anao izy ary efa nanomana olana toy izany izy ireo hahafahana mamaha azy. Satria ny olona rehetra no nanonganana azy; voafidy ny ain'ny tsirairay ary tsy misy olona mahazo mandray voninahitra sy fahefana.
Saingy Andriamanitra mahalala ny hamonjy ny olona mpanota - ary na manao ahoana na ahoana matetika izy ireo dia mikorontana ny zava-drehetra, dia hainy ny mamonjy azy.
Ny drafitr'Andriamanitra dia miantefa amin'i Jesosy Kristy - izay tsy nanota teo amin'ny toerantsika ary nijaly noho ny fahotantsika eo amin'ny toerantsika. Misolo tena antsika eo anatrehan'Andriamanitra izy ary manome antsika fiainana mandrakizay raha te hanaiky azy isika.
Fizarana 2: Fanomezan'Andriamanitra
Samy tsy nahomby daholo isika, hoy i Paul, saingy nohamarinina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Izy io! Tsy mendrika izany isika - omen'ny antsika amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony.
Ny olona izay afaka miatrika ny fiainany ho azy dia tsy mila hovonjena - dia ny olona izay manahirana mila mamonjy. Ireo "Lifeguard" dia tsy mamonjy olona afaka milomano - mamonjy olona maty an-drano. Ara-panahy dia rendrika daholo isika. Tsy misy na iray aza manakaiky ny fahalavorarian'i Kristy, ary raha tsy misy izany dia maty ara-panahy isika.
Betsaka ny olona no mieritreritra fa mila “ampy” ho an’Andriamanitra isika. Andao atao hoe manontany sasany isika: "Inona no mahatonga anao hieritreritra fa mankany an-danitra ianao na hanana fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra?" Hamaly ny maro hoe: «Satria tsara aho. Nataoko na izay. »
Ny marina dia na manao ahoana na manao ahoana soa nataontsika mba hahazoana toerana amin'ny tontolo tonga lafatra, dia tsy ho "tsara" mihitsy isika satria tsy lavorary. Tsy nahomby isika nefa nohamarinina tamin'ny fanomezan'Andriamanitra, tamin'ny nataon'i Jesosy Kristy ho antsika.
Tsy amin'ny asa tsara
Namonjy antsika Andriamanitra, hoy ny Baiboly, “tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany.”2. Timoty 1,9). Namonjy antsika Izy, tsy noho ny asan’ny fahamarinana izay nataontsika, fa noho ny famindram-pony. » (Titosy) 3,5).
Na dia tena tsara aza ny asantsika, tsy ireny no antony hamonjen'Andriamanitra antsika. Mila voavonjy isika satria tsy ampy ny asantsika tsara mba hamonjy antsika. Mila famindram-po sy fahasoavana isika ary omeny antsika fotsiny amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy.
Raha afaka mahazo fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'ny fitondran-tena tsara isika, dia Andriamanitra no nilaza tamintsika ny fomba. Raha toa ka manome antsika fiainana mandrakizay ny fanarahana ireo didy dia ho toy izany no nataon'Andriamanitra.
“Fa raha tsy nomena ny lalàna mahavelona, ​​dia avy amin’ny lalàna tokoa ny fahamarinana.” (Galatiana 3,21). Fa ny lalàna dia tsy afaka manome antsika ny fiainana mandrakizay - na dia afaka mitandrina izany aza isika.
“Fa raha avy amin’ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy” (Galatiana 2,21). Raha afaka miasa ho an'ny famonjena azy ny olona, ​​dia tsy mila Mpamonjy hamonjy antsika isika. Tsy nilaina ny nahatongavan’i Jesosy teto an-tany na ny fahafatesana sy ny nitsanganany tamin’ny maty.
Fa noho io tanjona io indrindra no nahatongavan’i Jesosy teto an-tany, dia ny ho faty ho antsika. Nilaza i Jesosy fa tonga Izy “mba hanolotra ny ainy ho fanavotana ny maro.” ( Matio 20,28 ). Ny ainy dia fandoavana ny vidim-panavotana nomena mba hanafahana sy hanavotana antsika. Asehon’ny Baiboly imbetsaka fa “maty ho antsika i Kristy” ary maty “ho an’ny fahotantsika” izy (Romana). 5,6- enina ambin'ny folo; 2. Korintiana 5,14; 15,3; Gal
1,4; 2. Thessalonians 5,10).
“Fahafatesana no tambin’ny ota”, hoy i Paoly ao amin’ny Romana 6,23“Fa fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika”. Mendrika ny fahafatesana isika, fa ny fahasoavan’i Jesosy Kristy no namonjena antsika. Tsy mendrika ny hiara-hiaina amin’Andriamanitra isika satria tsy lavorary, fa Andriamanitra kosa mamonjy antsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany.
Ny Baiboly dia manazava ny famonjena antsika amin'ny fomba maro - indraindray dia mampiasa teny ara-bola indraindray, teny indraindray manondro ireo niharam-boina, fianakaviana na namana.
Ny fe-potoana ara-bola dia manondro fa izy no nandoa ny vidiny hanafaka antsika. Noraisiny ny sazy (fahafatesana) mendrika antsika ary naloany ny trosa naloakantsika. Raisiny ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika ary manome antsika ny fahamarinany sy ny fiainany isika.
Eken’Andriamanitra ny ‘soritr’i Jesosy ho antsika (fa Izy no naniraka an’i Jesosy hanome izany), ary manaiky ny fahamarinan’i Jesosy ho antsika Izy. Koa isika izay nanohitra an’Andriamanitra fahiny dia sakaizany ankehitriny (Romana 5,10).
“Ianareo koa, izay vahiny sy fahavalo tamin’ny asa ratsy fahiny, dia efa nampihavaniny ankehitriny tamin’ny fahafatesan’ny vatany mety maty, mba hahatonga anareo ho masina sy tsy hanan-tsiny ary tsy hanan-tsiny eo anatrehan’ny tavany” (Kolosiana). 1,21- iray).
Noho ny fahafatesan'i Kristy dia masina isika avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'Andriamnitra dia avy amin'ny trosam-trosa lehibe izahay fa tsy miankina amin'ny zavatra nataontsika, fa nifototra tamin'Andriamnitra.
Andriamanitra dia miantso antsika ho zanany ankehitriny - Izy no nanangana antsika (Efes 1,5). “Zanak’Andriamanitra isika” (Romana 8,16). Ary avy eo i Paoly dia milazalaza ny vokatry ny fananganan-janaka antsika: “Raha zanaka isika, dia mpandova koa, dia mpandova an’Andriamanitra sady mpiray lova amin’i Kristy” (and. 17). Lazaina ho lova ny famonjena. “Nataony mendrika ho lovan’ny olona masina ao amin’ny mazava ianareo.” (Kolosiana 1,12).
Noho ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra, noho ny fahasoavany dia handova harena isika - hizara an'izao tontolo izao amin'i Kristy. Ary raha tokony kosa, dia hizara izany amintsika izy, tsy hoe efa nataontsika, fa noho izy tia antsika ary tiany homeny antsika izy.
Jesosy no nahafeno fepetra ho antsika; tsy noho ny fahotantsika ihany no nandoavany ny sazy, fa noho ny otan’ny olona rehetra (1. Johannes 2,2). Saingy mbola maro ny olona tsy mahazo izany. Angamba ireo olona ireo dia mbola tsy nandre ny hafatry ny famonjena, na mety efa nandre dikan-teny diso izay tsy misy dikany aminy. Noho ny antony tsy ninoan'izy ireo ilay hafatra.
Toa an'i Jesosy nandoa ny trosany, nanome kaonty banky be dia be izy ireo, saingy tsy naheno azy ireo, na tsy tena nino azy na tsy eritreretiny fa nanana trosa mihitsy izy ireo. Na toa an'i Jesosy nanipy fety lehibe dia nomeny tapakila fidirana izy, saingy misy ny misafidy ny tsy ho avy.
Na izy ireo dia andevo miasa amin'ny loto, ka tonga i Jesosy ary miteny hoe: "nividy ny fahafahanao aho". Misy ny olona tsy mandre an'io hafatra io, ny sasany tsy mino izany, ary ny sasany kosa aleony hijanona ao amin'ny loto fa tsy hahita hoe inona ny fahalalahana. Saingy ny hafa mandre ny hafatra dia mino, ary mivoaka avy eo amin'ny loto izy ireo mba hahitana hoe manao ahoana ny fiainana vaovao miaraka amin'i Kristy.
Ny hafatry ny famonjena dia raisina amin'ny alalan'ny finoana - amin'ny fahatokisana an'i Jesosy, amin'ny fandraisana Azy amin'ny teniny, amin'ny finoana ny vaovao mahafaly. “Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao” (Asan’ny Apostoly 16,31). Miasa ho an’izay rehetra mino azy ny filazantsara (Romana 1,16). Raha tsy mino ny hafatra isika, dia tsy hahasoa antsika izany.
Mazava ho azy fa ny finoana fotsiny dia tsy ny mino fotsiny momba an'i Jesosy. Ny zava-misy dia misy fiantraikany mampientam-po ho antsika - mila miala amin'ny fiainana namboarintsika araka ny endrintsika isika fa kosa mitodika any amin'Andriamanitra izay nanao antsika tahaka ny endriny.
Tokony hanaiky isika fa mpanota, tsy mendrika ny fiainana mandrakizay, ary tsy mendrika ny ho mpandova an'i Kristy isika. Tsy maintsy miaiky isika fa tsy ho "tsara" ho an'ny lanitra mihitsy - ary tsy maintsy matoky isika fa ny tapakila nomen'i Jesosy dia tsara tokoa ho antsika amin'ny fety. Mila matoky isika fa amin'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia ampy tsara izy handoavana ny trosantsika ara-panahy. Mila matoky ny famindram-pony sy ny fahasoavany isika ary miaiky fa tsy misy fomba hafa hidirana.
Andao hiverina any amin'ny dikan'ny fiainana ao anaty dinika ataontsika. Nilaza Andriamanitra fa nanao antsika ho tanjona Izy, ary ny hahatongavantsika ho tahaka azy. Tokony ho tafaray amin'ny fianakavian'Andriamanitra, sy ny rahalahin'i Jesosy, isika dia handray anjara amin'ny haren'ny fianakaviana! Tanjona mahafinaritra sy fampanantenana mahafinaritra izany.
Saingy tsy nanao ny anjaranay izahay. Tsy mbola tsara toa an’i Jesosy isika - izany hoe tsy tonga lafatra. Inona ary no mitarika antsika hino fa hahazo ny ampahany hafa amin’ilay “raharaha” koa isika - ny voninahitra mandrakizay? Ny valiny dia tsy maintsy matoky an’Andriamanitra isika fa mamindra fo sy miantra araka izay lazainy. Izy no nanao antsika ho amin’izany tanjona izany, ary Izy no hanatanteraka izany fikasana izany! Afaka matoky isika, hoy i Paoly, fa “Izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahavita izany koa mandra-pahatongan’ny andron’i Kristy Jesosy.” (Filipianina) 1,6).
Jesosy dia nandoa ny vidiny ary nahavita ny asa, ary ny hafany - ny hafatry ny Baiboly - dia ny famonjena antsika amin'ny alàlan'ny zavatra nataony ho antsika. Ny zavatra niainana (toy ny soratra masina) dia milaza fa tsy afaka miankina amin'ny tenantsika isika. Ny hany fanantenantsika famonjena, fiainana, hahatonga antsika ho tonga Andriamanitra nanao antsika, dia ny matoky an'i Kristy. Afaka ny ho tonga tahaka an'i Kristy isika satria, fantantsika ny lesoka rehetra sy ny tsy fahombiazantsika dia nolazainy fa hataony izany!
Tsy misy dikany ny fiainana raha tsy eo i Kristy - fa ao anaty maloto isika. Saingy Jesosy nilaza fa nividy ny fahalalahantsika izy, afaka manadio antsika, manome azy tapakila malalaka ho an'ny fety ary manome fahafaham-po tanteraka amin'ny haren'ny fianakaviana. Azontsika atao ny manaiky io tolotra io na azontsika atao ny manilika azy ary mijanona ao anaty loto.
Fizarana 3: Asaina ianao amin'ny fanasambe!
Jesosy dia toy ny mpandrafitra mpandrafitra tokana tao amin'ny tanàna kely iray izay tsy dia misy dikany amin'ny ampahany amin'ny Fanjakana Roman. Izao anefa dia raisina ho be mpitia indrindra izy hatramin'izay. Na ny tsy mpino aza dia miaiky fa nanolotra ny fiainany hanompoana ny hafa izy, ary io halehiben'ny fitiavana feno fahafoizan-tena io dia miitatra hatrany amin'ny halalin'ny fanahin'olombelona ary hikasika ny endrik'Andriamanitra ao amintsika.
Nampianatra izy fa ny olona dia afaka mahita ny tena fiainana sy feno raha vonona ny hamoy ny fijanonany izy ireo ary hanaraka azy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
“Na iza na iza mahafoy ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany.” (Mat 10,39).
Tsy manan-javatra ho very isika afa-tsy ny fiainana tsy misy dikany, fiainana mahakivy ary omen'i Jesosy antsika fiainana tsara sy mahafaly ary mampientam-po - ho an'ny mandrakizay. Nanasa antsika hiala amin'ny fireharehana sy ny ahiahy izy, ary mahazo am-po sy fifaliana ao am-po isika.
Fomba an'i Jesosy
Jesosy dia manasa antsika hiaraka Aminy amin'ny voninahiny - fa ny dia mankany amin'ny voninahitra dia mitaky fanetren-tena amin'ny alàlan'ny fanaovana tombony amin'ny olon-kafa. Mila manadino ny zavatra rehetra eto amin'ity fiainana ity isika ary hanamafy ny fihazonantsika an'i Jesosy. Raha te hanana fiainana vaovao isika dia tsy maintsy vonona ny havelan'ny fiainana taloha.
Natao ho tahaka an'i Jesosy isika. Saingy tsy ny maka fotsiny ilay mahery fo manaja ihany isika. Ny Kristianisma dia tsy momba ny fombafomba ara-pivavahana na ny foto-pinoana mihitsy. Momba ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona, ​​ny tsy fivadihany amin'ny maha-olombelona ary ny fitiavany sy ny fahatokiany izay hita amin'ny endrika olombelona ao amin'i Jesosy Kristy.
Maneho ny fahasoavany ao amin'i Jesosy Andriamanitra; hainy fa na manao ahoana na manao ahoana ezaka ataontsika, dia tsy ho tsara ho an'ny tenantsika mihitsy isika. Ao amin'i Jesosy dia manome antsika fanampiana Andriamanitra; Maniraka ny Fanahy Masina amin'ny anaran'i Jesosy hiaina ao amintsika Izy, hanova antsika amin'ny anatiny ivelany. Namboarin'Andriamanitra ho tahaka Azy isika; isika dia tsy miezaka ny hitovy amin'Andriamanitra.
Manome antsika fifaliana mandrakizay i Jesosy. Ny olona tsirairay, amin’ny maha-zanak’Andriamanitra azy, dia manana tanjona sy dikany — fiainana mandrakizay. Natao ho amin’ny voninahitra mandrakizay isika, ary ny lalana ho any amin’ny voninahitra dia Jesosy, Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana (Jaona 1.4,6).
Ho an’i Jesosy dia hazo fijaliana no tiana holazaina amin’izany. Miantso antsika koa izy mba hanatevin-daharana ity ampahany amin’ny dia ity. “Ary hoy Izy tamin’izy rehetra: Na zovy na zovy no te hanaraka Ahy, dia handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany isan’andro ka hanaraka Ahy.” (Lio. 9,23). Fa teo amin’ny hazo fijaliana dia nisy fitsanganana ho amin’ny voninahitra.
Ao amin’ny tantara sasany, dia nampitahain’i Jesosy tamin’ny fanasana ny famonjena. Tao amin’ilay fanoharana momba ny zanaka adala, ilay raim-pianakaviana dia nanao lanonana ho an’ny zanany lahy nivadi-pinoana izay nody tamin’ny farany. “Ento ny zanak’omby mifahy, ka vonoy; andao hisakafo dia ho faly e! Fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray; very izy ka hita » (Lioka 15,23-24). Notantarain’i Jesoa ilay tantara mba hanehoana fa ny lanitra rehetra dia mifaly rehefa mitodika amin’Andriamanitra ny olona iray (and. 7).
Nanao fanoharana hafa i Jesoa momba ny olona iray (misolo tena an’Andriamanitra) izay “nanamboatra fanasana lehibe sy nanasa vahiny maro” (Lioka 1.4,16). Nahagaga anefa fa maro no tsy niraharaha an’io fanasana io. “Ary nifona tsirairay izy ireo” (and 18). Nanahy ny amin’ny volany na ny asany ny sasany; ny sasany variana tamin’ny raharahan’ny fianakaviana (and. 18-20). Koa nanasa ny mahantra kosa ny Tompo (and 21).
Toy izany koa ny famonjena. Jesosy dia manasa ny olona rehetra, fa ny olona sasany dia sahirana amin'ny zavatra eto amin'ity tontolo ity. Ireo izay "mahantra", izay mahatsapa fa misy zavatra lehibe kokoa noho ny vola, ny firaisana ara-nofo, ny fahefana ary ny laza, dia maniry ny hankalazana ny tena fiainana amin'ny Fanasan'ny Tompo.
Nitantara tantara iray hafa koa i Jesosy izay nampitahainy ny famonjena tamin’ny lehilahy iray (misolo tena an’i Jesosy) nandeha tamin’ny dia iray. “Fa tahaka ny lehilahy nandeha tany ivelany izy ka niantso ny mpanompony ka nanolotra ny fananany taminy; Ary nomeny talenta volafotsy dimy ny iray, ary roa ny iray, ary ny fahatelo, samy araka izay fahaizany avy, dia lasa nandeha izy » (Matio 2.5,14-15). Ny vola dia afaka maneho zavatra maromaro nomen’i Kristy antsika; andeha hojerentsika eto ho fanehoana ny hafatry ny famonjena.
Rehefa afaka elaela, dia niverina ny Mpitarika ary nangataka ny hisian’ny fifanarahana. Ary nisy roa lahy tamin'ny mpanompo nampiseho fa nahavita zavatra tamin'ny volan'ny tompony izy, ka nahazo valim-pitia: "Dia hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo mahay sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao, ka tiako be dia be; midira ao amin'ny sitraky ny Tomponao!" (Lioka 15,22).
Jesosy dia manasa antsika hizara amin'ny fahasambarany, hizara aminy ny fifaliana mandrakizay izay napetrak'Andriamanitra ho antsika. Miantso antsika Izy hitovy Azy, ho tsy mety maty, tsy mety maty, be voninahitra ary tsy manota. Hahazo hery avy any an-danitra isika. Hanana hery, faharanitan-tsaina, famoronana, hery sy fitiavana izay mihoatra lavitra noho izay fantatsika isika izao.
Tsy azontsika atao irery ny manao izany - tsy maintsy avelantsika hanao izany ao amintsika Andriamanitra. Tsy maintsy ekentsika ny fanasana azy hivoaka avy amin'ny loto sy amin'ilay fanasana masina.
Efa nandinika ny fanekena ve ianao? Raha izany no izy, dia mety tsy hahita valiny mahavariana eo no ho eo, fa ny fiainanao dia azo antoka fa hisy dikany sy tanjona vaovao. Ho hitanao ny dikany, ho azonao ny toerana alehanao ary ny antony, ary hahazo hery vaovao, herim-po sy fihavanana ianao.
Jesosy dia manasa antsika amin'ny fety izay maharitra mandrakizay. Hanaiky ilay fanasana ve ianao?